Tanzania ga - anabata Expo Mpaghara Njem Nleta Ọwụwa Anyanwụ Africa na Ọktọba
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Tanzania ga - anabata Expo Mpaghara Njem Nleta Ọwụwa Anyanwụ Africa na Ọktọba
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị minista a niile ekwenyela ịtọlite ​​EAC Regional Tourism Expo (EARTE) kwa afọ na ebumnuche ịkwalite ọhụhụ mpaghara na ịre ahịa ya ka ọ bụrụ otu njem ndị njem.
Steeti ọwụwa anyanwụ Afrịka ga -eme nnukwu ihe ngosi njem nlegharị anya na Ọktoba afọ a.
A ga -edobe nke izizi na nnukwu ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara na Tanzania.
Nnukwu ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara ga -adọta ndị sonyere na mba ndị otu Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na South Sudan.
Njem nlegharị anya ahịa dị ka ngwaahịa akụ na ụba mpaghara, steeti ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Afrịka ga -eme nnukwu ihe ngosi njem nlegharị anya na Ọktoba afọ a n'okpuru mmụọ nke njikọta mpaghara na ịre ahịa njem mpaghara.
A ga -edobe ihe ngosi izizi na isi ihe nlegharị anya mpaghara na Tanzania, na -adọta mba isii so na East African Community (EAC) iji gosi ebe ndị njem nlegharị anya ha n'okpuru mkpuchi njikọta mpaghara na njem.
Akụkọ si Obodo Ọwụwa Anyanwụ Africa Isi ụlọ ọrụ dị na Arusha nke obodo ndị njem nlegharị anya nke Tanzania kwuru na a ga -eme ihe ngosi njem nlegharị anya mbụ na nke isi na Ọktọba iji dọta ndị sonyere na mba ndị otu Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na South Sudan.
Minista maka akụ na ụba na njem nlegharị anya na Tanzania Dr. Damas Ndumbaro ekwuputala ngosi ngosi njem nlegharị anya mpaghara n'oge nnọkọ mebere ya na ndị minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke East African Community (EAC).